Ukunyuka kweeNtsuku zeeNtshukumo zeNdwendwe kwiNye imilinganiselo kunye ne "Spider-Man: kude nekhaya" - I-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, Umsasazo osasazisi we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » Ukuphakama kweeNtsuku zeeNtshukumo ukuya kwelinye inqaku kunye ne "Spider-Man: kude nekhaya"
Ukuphakama kweeNtsuku zeeNtshukumo ukuya kwelinye inqaku kunye ne "Spider-Man: kude nekhaya"
Kwigalelo layo lokuqala kwi-Spider-Man franchise, i-studio ivelisa ihologram ebonisa imvelaphi ye-Elementals.
Adelaide, wase-Australia yaseMzantsi-Ukuphakamisa i-Sun Pictures ezithunyelwe ngaphezu kwe-100 iziphumo zokubukela ze-Columbia Pictures 'ne-Marvel Studios' I-Spider-Man: Kusuka Ekhaya, enye yebloki-bhsayithi ekhangelwe kakhulu kulo nyaka. Umsebenzi we-studio wawuquka ukulandelelana kweholographic ekhumbulekayo ebonisa enye imfihlelo engummangaliso: imvelaphi ye-Elementals, izidalwa ezine ezinezendalo ezivela kummandla ojikelezayo kunye nokukwazi ukulawula umlilo, umhlaba, amanzi kunye nomoya.
Ekhokelwa nguJon Watts, I-Spider-Man: kude nekhaya yindlela eya kwi-2017 I-Spider-Man: I-Homecoming kwaye ibali layo lisetyenziswe emva kweMarvel Studios 'hit-mega-hit ukusuka ekuqaleni konyaka, Abadlali: Ixesha lokugqibela. Usizi ngenxa yokufa kukaTony Stark, uPeter Parker (uTol Holland) uhlala kwiholide yaseYurophu, kodwa izicwangciso zakhe ziguquka xa ehlangana no-spymaster uNick Fury (uSamuel L. Jackson) kunye noQumen Beck / Mysterio (Jake Gyllenhaal), umxwayise ngesongelo elitsha kumhlaba. Imifanekiso yefilimu iquka uZendaya, uMarisa Tomei, uJon Favreau kunye noJacob Batalon. I-RSP yayisebenza phantsi kolawulo lweWatts, umphathi we-VFX uJanek Sirrs kunye nomvelisi weVFX uKyndi Ochs.
Nangona I-Spider-Man: kude nekhaya Amanqaku okuqala okubandakanyeka kwe-RSP kwi-Spider-Man franchise, i studio yakwazi ukudweba ngamava abo kwezinye iifoto ze-Marvel Studios eziquka UCaptain Marvel kwaye UTro: uRagnarok. "UCaptain Marvel Kwakhona kwaba neempembelelo ezininzi ze-hologram eziyinkimbinkimbi, kwaye sakha phezu kwaloo nto, "kuchaza umkhiqizi olawulayo we-RSP uGill Howe. "I-Marvel Studios inokulindela okuphezulu kunye neengcamango ezicacileyo zokudala. Ukuzihlangabeza kufuneka udakalise kwaye ube nombhobho onamandla. Safumana imivimbo yethu UCaptain Marvel kwaye UTro: uRagnarok. Oko kwandinceda kakhulu ngefilimu. "
Umsebenzi onzima kakhulu weRSP I-Spider-Man: kude nekhaya wabandakanyeka kwindawo esekelwe kwi-bunker yase-Venice yase-Venice, eItali, apho ecela khona iSpider-Man noFury ukuba ichaze ingozi ekhoyo eyenziwa yi-Elementals. U-Beck udlala ihologram ebonisa imvelaphi yezidalwa ngokulinganayo, ukubandakanyeka kwabo kwixesha elide elide lomhlaba kunye nendima yabo ekutshatyalaliswa kweplanethi yakhe yasekhaya.
Iqela le-RSP lenze iziboniso zendawo ukuba zifanise ibali elitshiwo nguBrakk. Kuyo, i-Elemental extradimensional iboniswa njengokuba ivela emigodini emnyama. Ukuzisa loo nto ebomini, abaculi bafumana ukuphefumlelwa kwiingcamango zenzululwazi zakutshanje malunga nokubonakala kunye nokuziphatha kwezimbobo ezimnyama, kunye nokubonakaliswa kwangaphambili kweziganeko kwiimifanekiso zeMarvel. "Ukujongwa kwezimbobo ezimnyama kwakuyinselele enkulu, zombini ngobuchule kunye nokunikezela," kusho umphathi weRSP VFX uTom Wood. "Sidibanise iingcamango zakutshanje kwi-physics-indlela izimbobo ezimnyama eziphazamisa ukukhanya kunye nexesha-kwaye zenze ukuba kuguquguquke kweMveli yeChamematic Universe. Kwakhona kwafuneka siqwalasele ukuba zeziphi iindlebe ezilindelwe kwizimbobo ezimnyama. Inkqubo yoyilo ibandakanya ukulinganisela okuthe tye. "
I hologram iyaqhubeka ichaza i-Elementals njengendima efihliweyo kwixesha elidlulileyo leMhlaba, idibanisa noothixo bamahedeni edibene nomlilo, umhlaba, amanzi kunye nomoya. Ngenxa yokulandelelana, abaculi bafunda isitatimende sasendulo kunye nama-totems. "Senze uphando olunzulu kwizithixo ezinxulumene nezixhobo eziyintloko," ukhumbula uCG uMphathiswa uRyan Kirby. "Isebe lethu leCG lenze izinto ezisekelwe kwiiJapan, eHawaii nakwezinye iindawo zehlabathi."
Isebe le-studio ye-2D inomsebenzi ongezelelweyo, ukuqulunqwa kwamanyathelo asebenzayo kunye nezinto zeCG, nokugqiba ukulandelelana. "Ngezinto eziveliswa yimihlaba, iFX, jonga dev, ukukhanya kunye nekhampani, kubalulekile ukuba wonke umntu obandakanyekayo kule nkqubo abuyele kwiphepha elifanayo," kuchaza i-Head of 2D uJess Burnheim. "Ukuba kukho utshintsho olwenziwe kwelinye isebe, lalinomsebenzi wokungqongqoza kuwo wonke umntu. Wonke umntu oxhasa imbono yokudala yayiyintloko. "
Ulandelelwano luphela neeplanethi kaBekk esetshenziswe ngomlilo. Yonke le mifanekiso kwakufuneka iqhutywe phambili ukuze ibukeke njenge-hologram. Kwimixholo yendawo, ihologram iyaxutywa etafileni enkulu kunye noBrakk, Fury and Spider-Man emi eceleni. Kwimifanekiso emininzi, abadlali bangacatshulwa ngasemva kunye nokuboniswa kwe holographic. "Sasisebenzisa i-volumetric renders ukwenza iifoto zibe ngathi zixhomeke kwisithuba," kuchaza uMthi. "Itheyibhile ngokwayo yenze enye ingxaki. Kwakuyinto ebalulekileyo ebhokisini lokukhanyisa ebusweni bomdlali. Kwakudingeka siphumelele eso sibane, sitshitshise okanye songeze iindawo kuyo ukuze ihambelane neenguqulelo kwihologram. "
I hologram nayo yafuneka ihambelane neenkqubo ze holographic eziboniswe kwezinye iifilimu zeMarvel. "Siye sabona iteknoloji yeThologram yeThony Stark kunye Banogcino the Galaxy iteknoloji, "kuchaza uMthi. "Ukongezelela, njengoko le filimu yenzeke emva kwe-Endgame, kwafuneka sigxile kwi-teknoloji yayo. I hologram yethu kufuneka ihambisane nayo, ngelixa idibanisa into enomdla kwaye entsha. "
Umnye umsebenzi we-RSP wawuquka indawo apho uFury uqala ukubonakala khona, naye wamangaliswa nguPeter Parker ngokukhangela ngaphandle kwendawo yokuhlambela xa ehlamba amazinyo. Iqela le-studio yokudibanisa lidibene ne-tranquilizer dart yokuba iFury isebenzisa ukuthulisa i-Ned kunye neehologram ezininzi ezinokubukela uFury kwisiboniso esicatshulwayo. Isebe lokumenza lenza umsebenzi omkhulu kummandla obekwe phambi kwendawo enkulu yomlilo kwisakhiwo esidala saseVenice esabandakanyeka izikrini zokwahlukana kunye nokucocwa. Kwimizuzu yesikhokelo sebusuku kunye noPeter Parker bekhangela kwisixeko sasePrague, iqela ladala umlingiswa weCG we-Mysterio ehambahambayo waza wongeza indawo yeedoloji yedolophu.
Umsebenzi onzima ophezulu esiye wadala kule minyaka embalwa edlulileyo uye wakhiqiza umbhobho onamandla, oku kuxhaswa ngokubikezela kwethu ngokufanelekileyo nokucwangcisa. "Kusho uHowe. "Siwabela amaqela nangaphambi kokuba umsebenzi ungene emnyango. Siyazi ukuba yiliphi ivolumu elindelekileyo kwaye yiziphi izakhono ezifunekayo, kwaye oko kusinikisayo ukuba senze ngokukhawuleza utshintsho kunye nezicelo ezongezelelweyo. "
Kuzo zonke iinyanga ezilisibhozo zomsebenzi kule projekthi, i-RSP yahlala isondelelene kunye neqela lemveliso kunye nabanye abathengisi ababonakalayo njengoko izibhengezo zaphuhliswa kwaye umthwalo walo msebenzi uphumelele. "Kwakungenasiphelo," utshilo umvelisi weVFX uArn Munro. "UJanek Sirrs, uCyndi Ochs, umhlobo we-VFX uBryan Searing, umququzeleli we-VFX u-Val Andino kunye nalo lonke iqela lokuvelisa elinoyikekayo. Siyaziqhenya kakhulu ngokulandelelana kweehologram, ukususela ekuqaleni kokungena kwi-delivery, iqela lenze umsebenzi okhuthazayo, obangela ukulandelelana okubaluleka kweli bali. "
KwiRising Sun Pictures (RSP) senza iziphumo ezibonakalayo ezikhuthazayo kwii-studio ezinkulu kwihlabathi jikelele. I-studio yethu yindlu yabaculi abanamakhono athile abasebenza ngokubambisana ukuze banike umfanekiso obalulekileyo. Ukugxininisa ekuveliseni izisombululo eziphezulu kunye nezisisombululo, i-RSP ine-flexible flexible, ipayipi yenkcubeko, evumela ukuba inkampani ikhutshwe ngokukhawuleza kwaye ihlengahlengise umsebenzi wayo ukuze ihlangabezane nokukhula kweemfuno ezibonakalayo zabaphulaphuli.
I-studio yethu inomdla wokuba i-Adelaide, eMzantsi wase-Australia, enye yezona zixeko eziphila kakhulu. Oko, ukudibaniswa nedumela lethu elihle, kunye nokufikelela kwesinye isaphulelo esikhulu nakwethembekileyo, kwenza iRSP ibe yimpempe yabenzi befilimu ehlabathini lonke. Oku kusenze siphumelele impumelelo kwaye senze i-RSP ukuba negalelo kwiqela leeprojekthi kuquka iDumbo, iPredator, iTomb Raider, uPeter Rabbit, Ihlabathi lezilwanyana, iTrans: uRagnarok, i-Logan, i-Pan, i-X-Men franchise kunye neMdlalo yeZihlalo zobukhosi.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli Iintetho kunye nemisrya IKOLONIE / Chicago TVU Networks Iimpawu Zobonakaliso	2019-07-10
Previous: I-Alchemy Post Sound Yenza I-Foot Foot Yayihamba Ngayo Ekukhuliseni I-Foley yeFX "I-Fosse / Verdon"
next: I-FSR ihambisa 'i-Smart' Isisombululo kwi-InfoComm 2019